မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရအနေနဲ့ အစဉ်လေးစား ကာကွယ်ပေးသွားမယ်လို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် အစီရင်ခံစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မနေ့ညနေပိုင်းက တိုင်းပြည်ကို ပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိအခြေအနေကို လက်တွေ့ကျတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီး၊ အနာဂတ်မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာရေးကိုရှေးရှုတဲ့၊ သမိုင်းဆိုးမွေတွေထဲက ရုန်းထွက်ပြီး အနာဂတ်ကိုရှေးရှုတဲ့အဖြေတွေကို ရှာဖွေကြရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို အလွဲသုံးပြီး အမုန်းတရားကိုလံှု့ဆော်တဲ့ အပြောအဆိုတွေ၊ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေရဲ့ဇစ်မြစ်တွေကို လျစ်လျူရှုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မူဆလင်ကြားက ပဋိပက္ခအဖြစ် ရှုမြင်ပုံဖော်နေတာတွေဟာ ပဋိပက္ခကို ပိုမိုကြီးထွားစေခဲ့ကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံးဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်ဟာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအစီအမံတွေ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တရားမဝင် ဆက်လက်ဝင်ရောက်လာသူတွေကို ဟန့်တားရေး၊ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူရေး၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသူတွေအတွက် ရေတို၊ ရေရှည်စီမံချက်တွေနဲ့ ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေ ရယူသွားမှာဖြစ်သလို၊ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း အကူအညီပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အရင်ကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့တချို့ရဲ့ လုပ်ကိုင်နည်းအမှားတွေကြောင့် ပြဿနာပိုရှုပ်ခဲ့တာလည်း မငြင်းနိုင်ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ မူလကရောက်ရှိနေကြတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူတွေအပေါ် လူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးတွေကို လက်တွေ့ကျကျ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှဖြစ်သလို၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ လိုလားချက်တွေကိုလည်း လုံးဝလျစ်လျူရှုမှာမဟုတ်ကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ မိန့်ခွန်းကောက်နှုတ်ချက်ကို ဦးသစ်ဆင်းက ထုတ်နုတ်တင်ပြထားပါတယ်။
Warmly Welcome our President's Address to the nation, but words alone can not get the job done. CRIMINALS have penetrated into the Ruling System and Monasteries.
Jun 29, 2014 10:28 PM
နိုင်ငံတော်ကို သီလဂုဏ်၊ သမာဓိဂုဏ်၊ ပညာဂုဏ် တို.ဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသူများ ဦးဆောင်အုပ်ချူပ်နိုင်ပါစေ။
အ္လေပာင်္တေံကို ရပ်စေခငြျ္လပီ အလုပ်နဲ့သက်သေပြပါ လူထုတရပ်လုံး လက်ခံနိုင်တဲ့ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ပေးပါ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်မလုပ်ပါနဲ့
May 08, 2013 07:28 AM
shs2dagon
U Thein Sein, we recognized you asaGOOD president of Myanmar....... Save Rakhine and Myanmar people from Bengali's danger by 1982 Burma citizenship law. We hope that you will stand on truth.